မကွေးတိုင်း – Page 16 – ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၂. ၈. ၂၀၁၈ ​နေ့ ၁၄၀၀ နာရီတွင်​ မ​ကွေးတိုင်းဒေသကြီး မင်းဘူးမြို့နယ် စကုမြို့ ကုလားပါး​ကျေးရွာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်​သည့်​ ပါတီဝင်​အဆိုပြုလွှာစု​ပေါင်းပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ပါတီဝင်​အဆိုပြုလွှာစု​ပေါင်း​ပေးအပ်​ပွဲသို့ ဗဟိုအလုပ်​အမှု​ဆောင်​၊ မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီးပါတီဥက္ကဌ တက်​​ရောက်​၍ ကြိုဆိုနှုတ်​ခွန်းဆက်​စကား​ပြောကြား
မင်းဘူး(စကု)​၊ သြဂုတ်​၊ ၂၂
ချောက် သြဂုတ် ၂ဝ
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး စလင်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးအမာခံ နယ်မြေလှည်းကြီးစုရပ် အမာခံပါတီဝင်များက ရေနုတ်မြောင်း ဖောက်လုပ်ရေးတွင် လုပ်အားပေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စလင်းမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးမှ ဘဏ္ဍာရေးမှူးဒေါ်နွယ်နီနိုင်၊ မြို့နယ်ကော် မတီဝင်ဦးဝင်းခိုင်၊ ဦးဌေးအောင်တို့က အာဟာရဒါနကျွေးမွေးခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မကွေးမြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ကန်ပြားကျေးရွာ ပေါက်အိုဓမ္မရိပ်သာကျောင်းတိုက်ရှိ ဓမ္မစကူးလ်သင်တန်း ကျောင်းသားကျောင်း သူများကို ယနေ့နေ့လယ်က အာဟာရဒါနလှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါအာဟာရဒါနလှူဒါန်းပွဲသို့ ခရိုင်ပါတီကော်မတီဝင် ဦးအောင်နိုင်၊ မြို့နယ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်သိန်းကျော်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်မျိုးဇော်နှင့် ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဒေါ်စုစုနောင်၊ မြို့နယ်ကော်မတီဝင် ဦးတိုင်းကျော်၊ ဦးတင်ဌေး အောင်၊ ဦးထွန်းအောင်ကျော်၊ ဒေါ်ခင်မင်းသိန်း၊ ရုံးအဖွဲ့များဖြင့်သွားရောက်၍ ကုသိုလ်ဒါနပြုခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မြိုင်မြို့နယ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်နိုင်၊ အတွင်းရေးမှူး ဦးထိန်လင်းနှင့် မြို့နယ်ပါတီကော်မတီများသည် လူငယ်ကိုယ်စားလှယ် ကိုအောင်ဆန်းထွန်း နှင့်လူငယ်ကော်မတီဝင်များ ပါဝင်လျက် မန်ကျည်းကန်ကျေးရွာပါတီဝင်များနှင့်တွေ့ဆုံပွဲကို ပါတီဝင်ဦးအောင်မြိုင်နေအိမ်၌ ယနေ့နံနက်က သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လတ်တလောဖြစ်ပေါ် နေသော နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် နိုင်ငံခြားငွေကြေးမတည်ငြိမ်မှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကုန်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုအခြေအနေများကို ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
​ရေစကြို ၊ သြဂုတ်​၊ ၁၉
ပါတီဝင်​အဆိုပြုလွှာစု​ပေါင်း​ပေးအပ်​ပွဲအခမ်းအနားကို ယ​နေ့ နံနက်​ ၁၀ နာရီအချိန်​တွင်​ မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီးပခုက္ကူခရိုင်​၊ရေစကြိုမြို့နယ်​ သာစည်​အုပ်​စု​ကျေးရွာ၌ ကျင်းပပြုလုပ်​ရာ အခမ်းအနားသို့ ပြည်​​ထောင်​စုကြံ့ခိုင်​​ရေးနှင့်​ဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ ဗဟိုအတွင်း​ရေးမှူးမ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီးတာဝန်​ခံ ဦးပိုက်​​ထွေး၊ ဗဟိုအလုပ်​အမှု​ဆောင်​၊ တိုင်း​ဒေသကြီးပါတီဥက္ကဌ ​ဒေါက်​တာ​မောင်​​မောင်​​ဌေး၊အတွင်း​ရေးမှူး ဦးဆန်းညွန့်​​အောင်၊ဘဏ္ဍာ​ရေးမှူး
ဦးကြည်​ထွန်း၊ ​တိုင်းပါတီ​ကော်​မ‌တီဝင်​များ ၊ပခုက္ကူခရိုင်​ပါတီဥက္ကဌဦးသိန်းထွန်း၊ အတွင်း​ရေးမှူး ဦးမြင့်​နိုင်​နှင့်​ခရိုင်​ပါတီ​ကော်​မတီဝင်​များ၊ မြို့နယ်​ပါတီဥက္ကဌ ဦးသိန်းလွင်​​​နှင့်​ မြို့နယ်​ပါတီ​ကော်​မတီဝင်​များ၊ ရပ်​​ကျေးပါတီဥက္ကဌများ၊ ပါတီဝင်​အသစ်​ ၃၇၅ ဦး အပါအဝင်​စုစု​ပေါင်းအင်​အား ၇၀၀ ​​ကျော်​တက်​​ရောက်​ခဲ့ကြပါသည်​ ။
မင်းဘူး/စကုမြို့နယ်တွင် တိုင်း/ခရိုင်/မြို့နယ်စုံညီအစည်းဝေးကို မြို့နယ်ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီရုံးခန်းမတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ရာ မကွေးတိုင်းပါတီဥက္ကဌ ဒေါက်တာမောင်မောင်ဌေး၊ တိုင်းအတွင်းရေးမှူး ဦးဆန်းညွန့်အောင် ၊ တိုင်းတောင်သူလယ်သမားရေးရာတာဝန်ခံ ဦးအောင်နိုင်၊ တိုင်းလူငယ်ရေးရာတာဝန်ခံ ဦးကျော်သူဦး၊ တိုင်းလုပ်ငန်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီတာဝန်ခံ ဦးစောဝင်းမောင်၊ တိုင်းစည်းရုံးရေးရာတာဝန်ခံ ဦးဟန်မောင်၊ ခရိုင်အတွင်းရေးမှူး ဦးစိန်ရွှေမင်းနှင့်ခရိုင်ကော်မတီဝင်များ၊ မြို့နယ် (၅) မြို့နယ်မှ ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၊ ပါတီကော်မတီဝင်များ တက်ရောက်ကြပါသည်။